Apple dia mandefa ny beta fahadimy an'ny macOS Sierra | Avy amin'ny mac aho
Hita fa ilay orinasa monina any Cupertino manitsaka ny lasantsy satria toa te hanao fialan-tsasatra herinandro amin'ny volana aogositra izy ireo. Tamin'ity herinandro ity, raha ny teôria dia tsy nisy ny fandefasana beta, fa toy ny mahazatra dia manohy ny diany manokana ihany i Apple ary nanararaotra omaly tolakandro mba hanombohana ny famoahana beta toa ny tao amin'ny kaonseritra nisintona T-shirt. Amin'ity tranga ity dia nanararaotra sy nanangana beta i Apple ho an'ny developer sy ny mpampiasa beta ampahibemaso an'ny iOS, tvOS, watchOS ary macOS, izay na dia samy hafa isa aza izy ireo, dia mitovy dika amin'ny rafitra fiasa.
macOS Sierra amin'ny beta fahadiminy izao azo alaina ho an'ny developer sy ny mpampiasa beta ho an'ny daholobe, izay ahafahantsika mamaky amin'ilay fanamarihana farany Apple dia nifantoka tamin'ny fampifanarahana ny birao sy ny fampirimana antontan-taratasy iCloud, ity fiasa vaovao ity izay ahafahantsika miditra amin'ireo singa rehetra ao amin'ny birao Mac-na misy fitaovana misy fidirana ny kaonty iCloud anay, safidy iray andrasan'ny mpampiasa maro.
Fa nihatsara ihany koa ny fiasan'ny safidy hamaha ny Mac amin'ny alàlan'ny Apple Watch, endri-javatra vaovao hisorohana ny mpampiasa Apple Watch sy Mac misy Bluetooth 4.0 na avo kokoa tsy hiditra amin'ny OS X nefa tsy mila miditra ny teny miafin'ny fidirana.
Apple koa dia nifantoka tamin'ny fanatsarana ny ny fomba fiasan'ny Apple Pay amin'ny alàlan'ny Safari, iray amin'ireo fiasa vaovao hafa izay ho avy amin'ny tanan'ny macOS Sierra ary hahafahan'ny mpampiasa rehetra, izay misy Apple Pay, handoa vola amin'ny alàlan'ny browser sy ny iPhone, izay hamafisinay ny fividianana amin'ny alàlan'ny dian-tananay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Apple dia mandefa ny beta fahadimy an'ny macOS Sierra
mahatratra ny beta fahadimy ihany koa ny tvOS 10